Dal Muslim Ah Oo Isaga Oo Gumaysi Ku Hoos Jira Horumar Ka Gaadhey Gaadiidka Dagaalka.
Thursday March 08, 2018 - 12:32:02 in Wararka by Halgan News
Mid kamid ah dalalka Muslimiinta ah ee dawladda Ruushku awooda ku haysato ayaa soo saaray hub noociisu cusub yahay, kaas oo awood u leh inuu ka dagaalamo Berriga iyo Biyaha labadaba.
Caasimadda dalka Chechnya ee Grozny ayaa lagu soo bandhigay gawaadhi cusub oo ay sameeyeen ciidamada gaarka ah ee wadanka Chechnya , kuwaas oo awood u leh inay ka dagaalamaan meelo kala duwan.
Gawaadhidan oo leh afar taayir sida gawaadhida caadiga ah ayaa sidoo kalena ay ku rakiban yihiin qoryo dhawr ahi, waana gawaadhi aad uga yar yar gawaadhida kale, waxaana tijaabaddii ugu horeysay ku sameeyey madaxweynaha Chechnya Ramdan Kadyrov .
Madaxweynaha Chechnya oo boggiisa Twitter-ka ku qoran qormo kooban oo uu wargeyska Dawan kasoo xigtay ayaa sheegay in gawaadhidan ay sameeyeen ciidamada gaarka ah ee dalka Chechnya , kuwaas oo noqon doona kuwo ay iyagu si gaar ah u adeegsadaan.
Gawaadhidan ayaa kaga duwan gawaadhida kale , iyaga oo awood u leh inay caqabado badan ka gudbaan, iyaga oo xawaarohoodu yahay mid aad u sareeya, qabashadda shaqooyin kala duwan oo ay ka qaban karaan dhulka iyo baddaba iyo xiliyadda kala duwan oo ay hawlgalo samayn karaan.
Gawaadhidan waxa saaray qoryo waaweyn , kuwaas oo uu kamid yahay qoriga A-GAS, lix qori oo yar yar oo Laysar leh , qalab laga hagi karo Satellite-ka , kaas oo si fudud u geyn kara goobaha la beegsanaayo, waxaanu saacaddii jari karaa masaafo dhan 100 km xataa wadooyinka jajaban.
Madaxweyne Kadyrov ayaa sheegay in gawaadhidani yihiin kuwo la awood ah lana qiimo ah gawaadhida ay inta badan isticmaalaan ciidamada Israel iyo Maraykanku ee ugu qaalisan, uguna dambeeyey, waxa kale oo uu madaxweynuhu sheegay in gawaadhidani awood u lee yihiin in ay fuliyaan hawlgalo kala duwan.
Ciidamada Chechnya ayaa sannadihii ugu dambeeyey ahaa kuwa soo saara hubka ugu casrigan wadanka Ruushka ee ay ciidamada Ruushku isticmaalaan, iyada oo wershaddo dhinaca hubka ah laga sameeyey dalkaasi Chechnya oo ay dawladda Ruushku gacanta ku hayso.